ပင်လယ်ပြင်မှ ကယ်တင်ခဲ့ရသော နောက်ထပ် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီ ၂၈၀ ကို ဘာဆန်ချာကျွန်းသို့ ပို့ဆောင်၊ တူရကီက ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီတို့အတွက် အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ ပေးပို့ကူညီ – H2Oupdatenews
ပင်လယ်ပြင်မှ ကယ်တင်ခဲ့ရသော နောက်ထပ် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီ ၂၈၀ ကို ဘာဆန်ချာကျွန်းသို့ ပို့ဆောင်၊ တူရကီက ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီတို့အတွက် အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ ပေးပို့ကူညီ
ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်အစိုးရသည် နောက်ထပ် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီ ( မူရင်း ရိုဟင်ဂျာဟုဖော်ပြ ) ၂၈၀- ဦး တို့ကို ဝေးလံခေါင်ဖျား ဘာဆန်ချာကျွန်းသို့ ပို့ဆောင်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဘင်္ဂလားအခြေစိုက် Dhaka Tribune က ယမန်နေ့ရေးသားသည်။
ကြာသပတေးနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ကယ်ဆင်ခြင်းခံရသည့် ဒုက္ခသည်များလိုက်ပါလာသည့် ဘုတ်ကို ( ကော့ခ်ဘဇားတောင်ဖက် ) စိန့်မာတင်ကျွန်းမှ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်ရေတပ်မတော်သင်္ဘောတစ်စီးက တွဲဆွဲသွားခဲ့ကြောင်း၊ ဘာဆန်ချာကျွန်းသို့ သောကြာနေ့ နံနက် ၂-နာရီခန့်တွင် ရောက်ရှိရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရှိရသည်။
ယခုကဲ့သို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရသူများမှာ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်းမှ ဒုတိယမြောက်ကယ်တင်ခြင်းခံရသော ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများဖြစ်ကြောင်း၊ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်၌ ပထမအသုတ်အနေဖြင့် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီ ကလေး ၅-ဦး၊ အမျိုးသမီး ၁၉-ဦး၊ အမျိုးသား ၅-ဦးတို့ကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်အရ အဆိုပါကျွန်းသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်ရေတပ်မတော် အရာရှိတစ်ဦးက ပြောဆိုသည်။
လွန်ခဲ့သည့် မေလဆန်းပိုင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အဗ္ဗဒူမိုမန်က ပြောဆိုရာ၌ ကယ်ဆယ်ခဲ့ပြီးသော ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများတွင် Covid-19 ကူးစက်ရောဂါပိုး စွဲကပ် နေ- မနေ အတိအကျ မသိရကြောင်း၊ ကူတူပါလောင်စခန်းသို့ ပြန်ပို့ခဲ့လျှင် ၎င်းနယ်မြတစ်ခုလုံး ရောဂါအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ကြောင်း၊ ဒုက္ခသည်အားလုံး ဘေးကင်းလုံခြုံစေရေးအတွက် ဘာဆန်ချာကျွန်းသို့ ပို့ဆောင်ရန် ၎င်းတို့အစိုးရအနေဖြင့် ဆုံးဖြတ်ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း ပါရှိသည်။
အခြားသတင်းရင်းမြစ်များအရ ဘာဆန်ချာကျွန်းသို့ ယခုအသုတ် ပို့ဆောင်ခြင်း ခံရသူများမှာ ပင်လယ်ပြင်အတွင်း လှေငယ်တစ်စီးဖြင့် မျောပါနေစဉ် လွန်ခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၌ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်ရေတပ်မတော်က ကယ်ဆယ်ခဲ့သူများဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါကျွန်းပေါ်တွင် လိုအပ်သမျှ အားလုံးတို့ကို ဖြည့်ဆည်းပေးထားပြီးဖြစ်ရာ ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများ အဆင်ပြေစွာ နေထိုင်နိုင်ကြလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်း၌ ဆက်လက်ဖော်ပြသည်။
တူရကီအစိုးရ၏ ပူးပေါင်းကူညီရေးနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ ( TIKA ) က ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများအတွက် တကိုယ်ရည် ကျန်းမာရေးသုံးပစ္စည်းအထုပ်ပေါင်း ၅,၀၀၀ ကို ပေးပို့လှူဒါန်းကြောင်း ၎င်းနိုင်ငံပိုင် အန်နာဒိုလူသတင်းဋ္ဌာနက ယမန်နေ့ဖော်ပြသည်။ ရာမာဇန်ရက်မြတ်ကာလ ဥပုသ်သီတင်းဆောက်တည်ကြသူများအား အထောက်အပံံ့ဖြစ်စေရန်ရည်စူး၍ တူရကီအစိုးရ၏ လှူဒါန်းမှုဖြစ်ကြောင်း သတင်း၌ဖော်ပြသည်။
(( ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်သတင်းစာများက ဘာဆန်ချာကျွန်းသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သူ ပထမအသုတ် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများမှာ ၂၈-ဦးဖြစ်ပြီး ကျွန်းပေါ်ရှိ တိုက်တန်းလျှားအမှတ် ၄၁ နှင့် ၄၂ တွင် နေရာချထားခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ကြပါသည်။ ယခုသတင်းတွင်မူ ကလေးငယ်များအပါအဝင် ၂၉-ဦးဖြစ်နေသည်။
ထို့ပြင် ဘာဆန်ချာကျွန်းသည် မောင်တောမြို့နယ်မှ လှမ်းမြင်နေရသည့် စိန့်မာတင်ကျွန်းမဟုတ်၊ ရှင်မဖြူကျွန်းလည်း မဟုတ်ပါ။ မြန်မာတို့သိသော နတ်မြစ်ဝရှိ ၁၈၂၃-ခုနှစ် ရှင်မဖြူကျွန်းသည် ယခုအခါ ကော့ခ်ဘဇားကုန်းမြေနှင့် တစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
စိန့်မာတင်ကျွန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရစဉ်ကတည်းက မြန်မာပိုင်မဟုတ်၍ ပိုင်နက်အငြင်းပွားကြောင်း သတင်းမတွေ့ဖူးပါ။ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နှင့် ICJ တရားရုံးရောက် အငြင်းပွားခြင်းမှာ မြန်မာတို့ ကမ်းလွန်ရေနံတူးနေခိုက် ရေပြင်ပိုင်နက် အငြင်းပွားခြင်းသာဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။
ဘာဆန်ချာကျွန်းသည် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တောင်ဖက် ၃၇ မိုင်ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိပြီး စိန့်မာတင်၏ အနောက်မြောက်ဖက် ၁၃၅ မိုင်ကျော် ကွာဝေးမည်ဖြစ်သည်။ မက်ဂီနာဂူလ်ဆာ မြစ်ဝတွင် ၂၀၀၆-ခုနှစ်က ပေါ်ထွန်းလာခြင်းဖြစ်၍ အကျယ်အဝန်း ၁၅ စတုရန်းမိုင်ခန့်ရှိသည်။ သက်တမ်းနုခြင်း၊ မြေနိမ့်ခြင်း၊ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော မုန်တိုင်းလမ်းကြောင်းပေါ်၌ တည်ရှိခြင်းတို့ကြောင့် လူနေရန်မသင့်ကြောင်း ဘူမိဗေဒနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပညာရှင်များက ရှု့မြင်ကြသည်။
ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်အစိုးရသည် အဆိုပါကျွန်းပေါ်တွင် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများအား ထားရှိရန် ၂၀၁၅-ခုနှစ်တွင် စတင် အကြံပြုခဲ့သည်။ ၂၀၁၉-ခုနှစ်တွင် အက်ရှာရာယန်စီမံကိန်း အဆင့်-၃ ဖြင့် ရေတားတမံများ၊ လူနေတိုက်တန်းများ၊ ဈေး၊ စာသင်ကျောင်း၊ အားကစားကွင်း၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများကို ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်သုံး တာကာငွေ ၃၀၉.၅ သန်း အကုန်အကျခံတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ဘာဆန်ချာကျွန်းပေါ်တွင် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီ ၁-သိန်း ထားရှိမည့် ရှိတ်ဟာစီနာအစိုးရ၏ အစီအစဉ်ကို လူ့အခွင့် အရေးအပါဝင်၊ ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတို့က ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်လျှက်ရှိသည်။ ။ သတင်းဘာသာပြန်သူ))
((( Dhaka Tribune., May 7, 2020, “280 more rescued Rohingyas sent to Bhashan Char.By: Ali Asif Shawon ” ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ )))
#ဒုတိယအသုတ်ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီ၂၈၀ #ဘာဆန်ချာကျွန်း #တူရကီကဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီတို့အတွက် အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများပေးအပ်
Published at 07:27 pm May 7th, 2020
They were rescued from the Bay of Bengal on Wednesday night
Another batch of 280 Rohingyas, who were rescued from the Bay of Bengal, has been sent to isolation in Bhashan Char.
A ship of Bangladesh Navy, towing the rescued boat, left the Saint Martin’s Island on Thursday afternoon, according to the Navy Headquarters.
The boat is scheduled to reach the island around 2am on Friday, he added.
They are the second batch of rescued Rohingyas, said the official, adding: “In the first phase, 19 women, five children and five males were relocated to the islandafew days ago as per the instruction from the Ministry of Foreign Affairs.”
Earlier on May 2, Foreign Minister Abul Momen said: “We have decided to send the rescued Rohingyas to Bhasan Char due to safety reason, as we do not know whether the rescued are Covid-19 positive or not. If they entered in the Kutupalong camp, the entire camp area will be at risk.”
Navy personnel rescued the Rohingyas from the deep sea on Wednesday while they were floating inasmall boat, according to sources.
All necessary arrangement has been initiated in the island so that the relocated Rohingyas can liveasmooth life there, sources said.
Previous Previous post: ကိုရိုနာရောဂါကာကွယ်ရေး တားဆီးပိတ်ဆို့မှုများ ဖြေလျော့စ အိန္ဒိယတွင် ဓါတုစက်ရုံ အဆိပ်ငွေ့များ ယိုစိမ့်ထွက်လာသဖြင့် လူအများအပြားသေဆုံး၊ ထောင်ချီ၍ ဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်း
Next Next post: သစ်ငုတ်မြင့်တုံ- မြက်မြင့်တုံ။ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးစောအား ကြိုးပေးခဲ့သည့် နေ့